Global Aawaj | » शारीरिक सुगठनका अघिल्लो पुस्ता मोहन शारीरिक सुगठनका अघिल्लो पुस्ता मोहन – Global Aawaj
शारीरिक सुगठनका अघिल्लो पुस्ता मोहन
विराटनगर नेपालको चौथो ठुलो शहर हो, जुन साविक कोशी अञ्चल अन्तर्गतको मोरङ जिल्लाको दक्षिण भागमा अवस्थित छ । हाल यो प्रदेश नम्बर १ को राजधानी समेत हो । यो शहरले नेपाली खेलकुदको क्षेत्रलाई थुप्रै होनहार खेलाडीहरु दिएको छ । अझै शारीरिक सुगठन खेलको कुरा गर्ने हो भने यसले घनश्याम मुखिया, पार्थसारथि सेन गुप्ता, पुष्प श्रेष्ठ र मोहन डंगोल जस्ता प्रतिभाशाली खेलाडी जन्माएको छ ।
आज हामी शारीरिक सुगठन खेलका अघिल्लो पुस्ताका खेलाडी मोहन दंगोलका बारेमा चर्चा गर्दै छौ । मोहन डंगोलको जन्म वि.सं. २००६ सालमा बिराटनगरमा भएको थियो । होचो कद गाँठीका मोहनलाई सानै देखी खेलकुदमा लगाव थियो । शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि साथीहरु मिलेर विराटनगर रानी स्थित आफ्नै घरमा सानो व्यायामशाला बनाएर कसरतहरु गर्ने गर्थे । उतिबेला दुईदुई इँटा दुई तिर बाँधेर बीचमा काठ राखेर बनाएको घरेलु बारबल रडबाट नियमित रुपमा व्यायाम गर्न गरेको मोहन बताउँछन् ।
२७-२८ साल तिर घनश्याम मुखिया भारतमा बिश्ब बिहार शारीरिक सुगठन प्रतियोगिताको उपाधि जितेर तिर नेपाल फर्किएका थिए । त्यतिबेला विराटनगर तिर कुस्ति पेहलवानीको खुब प्रचलनमा थियो । सुरुवातदेखि हेर्ने हो भने शारीरिक सुगठन खेललाई भारत्तोलनसँग नै जोडिएर हेरिने गथ्र्यो । उनले यो पहलमानी नभइ शारीरिक सुगठन (बडी बिल्डिङ्) भएको कुरा उनले युवाहरु बुझाए । क्रमशः कुमारदाई अर्थात घनश्याम मुखियासँग मोहनको हिमचिम बढ्न थाल्यो । भारतमा नाम कमाएर फर्किएका कुमार दाईको शरिर कस्तो होला ? भनेर मोहनलाई सधै जिज्ञासा लाग्न थाल्यो । एकदिन धेरै अनुरोध गरेर कुमारदाईलाइ शरिर देखाउन उनले अनुरोध गरे ।
उनको अनुरोध स्विकार गर्दै कुमारदाइ उनलाई आफ्नो शरीर प्रदर्शन गरे । उनको शरीर देखेर मोहन तिन छक्क परे । आफुले ढुङ्गा खोज्दा देउता पाए सरह भयो मोहनलाई । उनले थप प्रतिबद्ध भएर व्यायाम गर्न थाले । वि.सं. २०२९ साल तिर घरानमा व्यायाम गर्ने राज भगत प्रधानाङ्ग जागिरका शिलशिलामा विराटनगर आएका बेला मोहनसङ्ग उनको भेट भयो । त्यसपछि दुवै जना सँगै मिलेर व्यायाम गर्न थाले ।
वि.सं. २०३१ साल तिर भारत दार्जिलिङ्गबाट त्यहाँका शारीरिक सुगठन खेलका प्रशिक्षक गनु गिरीले छिरिङ्ग नाम गरेका खेलाडी लिएर आएका थिए । विराटनगर स्थित अरुण सेनेमा हलमा छिरिङ्गले आफ्नो शारीरिक पोजहरुको डमोष्ट्रेशन गरे । मोहनलाई छिरिङ्ग बलिष्ठ र मिलेको शारीरिक बनावटले असाध्यै प्रभाव पार्यो । आफुले पनि उस्तै शरीर बनाउने संकल्प गरे । भारतमा गएर केही थान डम्बल रड र प्लेटहरु आफ्नो व्यायामशालामा थप गरेर आफ्नो व्यायामलाइ थप सशक्त बनाउँदै लगे । एकपटक विराटनगरमा भएको विराट मेलामा उनको चिनजान पार्थसारथि सेन गुप्तासँग भयो । जो विराटनगरमा व्यायामशाला खोलेर व्यायाम गर्ने गर्थे । सबैले मिलेर विराटनगरमा एउटा शारीरिक सुगठनको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निधो गरे ।
वि.सं. २०३० सालमा तत्कालीन अवस्थामा ईंटाभट्टाका सञ्चालक अर्जुन प्रसाद अर्यालको आर्थिक सहयोगमा विराटनगरको हिमालयन हलमा प्रथम मिष्टर विराटनगर शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता सम्पन्न भयो । जसमा सुमन श्रेष्ट उपाधि विजेता बने । २०३४ सालमा वीरेन्द्र सभागृहमा त्रिभुवन आदर्श क्लबको आयोजनामा भएको दोस्रो मिष्ट्रर विराटनगर प्रतियोगिता सम्पन्न भयो । जसमा मोहन डंगोल उपाधि विजेता बनेर उपाधि उचाल्न सफल भए । मोहन डंगोलको बारेमा चर्चा गर्दै शारीरिक सुगठनका अग्रज घनश्याम मुखिया भन्छन्, ‘मोहन एक मेहनती खेलाडी हुन् । व्यायाम गर्दा निकै एकाग्रता पुर्वक व्यायाम गर्ने गर्थे । असाध्यै सम्भावना भएता पनि पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण उनको खेलयात्रा त्यत्ति लामो हुन सकेन ।’
मोहनले माध्यमिक तह सम्मको अध्ययन भारतको बनारसमा गरेका थिए । पछि नेपालबाट नै व्यवस्थापन विषयमा स्नातक उतिर्ण गरे । उनका समकक्षी पार्थसारथि सेन गुप्ता भन्छन्, ‘मोहन आफ्नो समयको विराटनगरमा भएका शारीरिर सुगठन खेलाडीहरु मध्ये शर्ट हाइट तर्फका उत्कृष्ट खेलाडी हुन् । उनले शारीरिक सुगठन खेलमा पुर्याएको योगदान नयाँ पिडीका खेलाडीहरुका लागि अनुकरणीय छ ।’
हाल मोहन विराटनगरमा कलरल्याब सञ्चालन गरेर बसेका छन् । कलरल्याबको नाम आर्मसले नै उनी अझैपनि शारीरिक सुगठन खेल तर्फको मोह हटेको छैन भन्ने कुरा बुझ्न काफी छ । शारीरिक सुगठनका पहिलो पुस्ताका खेलाडी मोहन डंगोलले यस खेल प्रति देखाएको समर्पणभनवको उच्च मुल्यांकल गर्दै शारीरिक सुगठन रुपन्देही परिवार हृदयदेखि नै उनी प्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दछ ।
विद्यालय सञ्चालनको तरखरमा स्थानीय तह
चिनियाँ मानवरहित अन्तरिक्ष यान चन्द्रमामा अवतरण
कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुनुपर्छ : पौडेल
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलबाट ५० अर्ब निक्षेप सङ्कलन गर्ने
नेपालगञ्ज विमानस्थल ‘हव एयरपोर्ट’ : मन्त्री भट्टराई
देशैभर विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त मन्दिर पुनःनिर्माणपछि …
कोरोनाको किरिया : कोरोनाबाट मुक्ति पाएपछि…
नेकपाको बैठक भोलि पुनः बस्ने, ओली-दाहालका प्रस्तावमाथि छलफल
बुटवलमा कार दुर्घटना, दुई जना घाइते
२०७७ मंसिर १०
२३ दिनपछि भेटिए कपिलबस्तुका ‘फुच्चे गाइड’ साहनी